Kushanda kwesilicone yemukati yekuburitsa mumiririri muindasitiri yekugadzira
Kwenguva yakareba, iyo indasitiri yechigadzirwa inongwarira kwazvo nezvekushandisa kwesilicone yemukati yekuburitsa mumiririri. Izvi zvinogona kuve nezvakawanda zvekuita nekunzwisisa kwakasiyana uye kushandiswa kwechigadzirwa
Iko kune kusanzwisisana kwakati wandei nezveiye anoburitsa mumiriri mu silica gel
Poshi. Nezve iko kukanganisa kwechinhu chakadhindwa, zviri nyore kukonzera kuwanda kwenguva yekudhinda.
Piri. Gadzirira zvekubatanidza zvigadzirwa zvepasi mameti, zvichikonzeresa murombo kunamatira.
3. Kuonekwa kwechigadzirwa kuri nyore kuburitsa mavara akajeka pamusoro.
4. Nyore kukonzera chando.
Nekuda kweizvozvo zvinotsausa pamusoro apa vanhu vanowanzoshaya mukana, nekuda kwekutya uye kusisashandise, zvichikonzera kusashanda zvakanaka kwesilicone kuburitsa mumiriri hakugone kushanda. Muchokwadi, iko kushandiswa kwenguva yakareba kwemukati kuburitsa mumiririri kuchaumba mwenje-huremu inotsvedza firimu pane chakuvhuvhu, uye chigadzirwa chiri nyore kupwanya, kunyanya zvigadzirwa zvesilicone izvo zvakaoma kuparadza. Kushandiswa kwakanaka kwemukati wekusunungura mumiririri kunobatsira kwazvo kugadzirisa kugona kwekugadzira, asi iyo nguva haina kupfupika, kuyedza kunoda inonzwisisika yekuenzanisa nguva.
Izvo zvinhu zvinotevera zvinofanirwa kuve nyanzvi kana zvine musoro kushandisa silicone yemukati muforoma kuburitsa mumiririri kuona iwo ruzivo:
Poshi. Sarudzo yesilica gel mbishi zvinhu hazvifanire kukara zvakachipa. (zvakachipa mbishi zvigadzirwa, kunyangwe kana pasina dambudziko nezvinhu zvacho, zvinogona kunge zvisina kugadzikana nekuda kwenguva yavo pfupi yekutsvaira nekugadzirisa nguva.)
Sarudzo ye disulfide mumiriri inofanirwa kuve yakajeka, zvirinani kugadzikana (kune zvimwe zvinhu zvine yakachena yakachena, iyo inokurumidza chigadzirwa kubikwa, zvirinani, asi zvakanyanya kugadzikana zvirinani)
3. Usaende kune zvakanyanyisa. (nekuda kwekusakwana kwesarufa yezviri muchigadzirwa, kunyanya kusarudzwa kweanokurumidza kupora mumiririri, iyo nzvimbo yakanaka kwazvo. Muchokwadi, iyo curcization curve haisati yapera, saka chando chinobuda, chingave chisiri chikonzero chemukati peeling.)
4. Shandisa huwandu hwakakodzera. (zvinongobatsira chete, kwete iro basa hombe. Kushandiswa zvine musoro kwezvigadzirwa, zvekubatsira uye tekinoroji yekugadzirisa zvinoratidza kukosha kwayo.)